Nzipu Division Factory - China Nzipu Division Manufacturers, Suppliers
KMI oghere n'usoro n'usoro Platform Gearhead HRG-85
Oghere na-agbagharị agbagharị bụ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe. A na-eji ya na ọtụtụ egwuregwu rotary. Ọ nwere ike dochie DD moto na igwe divider. Nịm elu arụmọrụ, elu kpọmkwem, elu rigidity, elu na-eri arụmọrụ na otu. Ọ bụ a amamihe ngwaahịa na n'usoro usoro. A na-enweta nguzozi n'etiti ha abụọ, nhazi ọkwa ugboro ugboro bụ seconds 5 sekọnd, moto dị mfe ịhazi, ibu ahụ kwụsiri ike. Enwere ike iji ya na AC servo moto ma ọ bụ igwe kwụpụ iji mee nkewa ọ bụla, nke nwere ike ọ bụghị naanị izute njikwa dijitalụ nke onye na-ekewa enweghị ike ị nweta, mana ọ ga-adaba na nhazi ọnọdụ nke moto DD. Ọ nwere ike belata ọnụ ahịa ya ma wetara gị nsonaazụ a na-atụghị anya ya.
KMI oghere n'usoro n'usoro Platform Gearhead HRG-130
KMI oghere n'usoro n'usoro Platform Gearhead HRG-200
KMI oghere n'usoro n'usoro Platform Gearhead HRG-280
1. Iburu na-akwado ikpo okwu na-agbagharị: ụdị nke a na-eji maka ikpo okwu na-agbagharị.
2. Allowable torque: osooso torque na ibu mgbanwe ga-ga-eji n'okpuru na-ekwe torque.
3. Inertia: nchikota nke agbanwe agbanwe nke rotor inertia nke moto akụkụ na inertia nke Mbelata usoro akụkụ na adiana n'elu ikpo okwu
4. Mkpebi: ọ pụtara ọnụọgụ ebili mmiri achọrọ maka otu mgbanwe nke usoro ntụgharị.
5. Ugboro ikwughari ugboro ugboro: uru na-egosi nhiehie ole na - eme mgbe a na - edobe otu ọnọdụ ahụ site n’otu ụzọ ahụ.
6. Ezi njehie na ntụgharị ntụgharị: ọ pụtara ọdịiche dị n'etiti nkuku nkwụsị mgbe agbadoro ikpo okwu na-agbagharị site n'akụkụ dị mma na ntụgharị ihu.
7. Angle nnyefe njehie: ọ pụtara ọdịiche dị n'etiti ezi uche ọrụ n'akuku nke adiana n'elu ikpo okwu gbakọọ si input usu nọmba na n'ezie ọrụ.
8. Ikwado ọrụ nnabata: na-ezo aka uru bara uru nke ibu axial na-etinye site na ntụziaka axis nke nyiwe na-agbagharị.
9. Ikike inertia na-ekwe ka: mgbe a na-etinye ibu ahụ na ọnọdụ eccentric na etiti nke ikpo okwu na-agbagharị, ike nke na-eme ka ikpo okwu na-agbagharị agbagọ ga-apụta. N'oge a, uru a gbakọrọ site na etiti ruo eccentric x ibu bụ ekwe ekwe nke ibu inertia.
10. Parallelism nke n'usoro n'usoro ikpo okwu: ọ na-egosi uche nke arịọnụ elu nke n'usoro ikpo okwu n'usoro metụtara akụrụngwa n'akụkụ arịọnụ elu nke breeki.
MWA Planucucuc HA-060
Ngwaahịa usoro Usoro nọmba HA-060 Nhazi ahaziri Ee Nkeji edemede MWA-HA-060 Atiya Planet reducer Gear type Gear reducer ingwụnye ụdị aka ike Lazọ nhazi formsdị atụmatụ Tricyclic Gearhardness Hardened ezé elu Ngwa Ngwa Reducer Brand MWA Mdị MWA-HA-060 Ntinye ọsọ ọsọ 5000 （ rpm） Njirimara 1. Ha usoro ụwa reducer adopts cross ala agba, nke nwere àgwà nke elu kpọmkwem, elu rigidity na nnukwu amị ikike; oge na-agba ...
MWA Planucucucer HA-090
Ngwaahịa data Usoro nọmba HA-090 Nhazi ahaziri Ee Nkeji edemede MWA-HA-090 Atiya Planet reducer Gear type Gear reducer ingwụnye ụdị aka ike Lazọ nhazi formsdị atụmatụ Tricyclic Gear ekweghị ekwe obi ike eze Ngwa Ngwa Reducer Brand MWA Mdị MWA-HA-090 Ntinye ọsọ 4000 （Rpm） Njirimara 1. Ha usoro mbara ala reducer adopts cross ala agba, nke nwere àgwà nke nkenke nkenke, elu rigidity na nnukwu amị ikike; amị oge bụ se ...
MWA Ntugharị Kwesịrị Ekwesị HAD-060
Ngwaahịa Usoro iwu nọmba HAD-060 Nhazi ahaziri Ee Nkeji edemede MWA-HAD-060 orydị Otu akuku Nkuku Gear 3000 （rpm） Njirimara 1. A na-ejikọ igwe eji arụ ọrụ na ntinye ntinye ma kpọchie ya site na mwekota mwekota. 2. A na-etinye ogwe ntinye na efere gia; e jikọtara efere gia na mmepụta ...
Ngwaahịa usoro iwu nọmba HAD-090 nhazi ahaziri Ee Nkeji edemede nọmba MWA-HAD-090 Udi aka nri Right Gearheads Gear type Gear reducer ingwụnye ụdị Ntọala Akuku youtdị ricdị Tricyclic Gear ekweghị ekwe Hardened ezé elu Ngwa Ngwa Reducer Brand MWA Mdị MWA-HAD-090 ọsọ ọsọ ọsọ 3000 （rpm） Njirimara 1. A na-ejikọ igwe eji arụ ọrụ na ntinye ntinye ma kpọchie ya site na mwekota mwekota. 2. A na-etinye ogwe ntinye na efere gia; e jikọtara efere gia na mmepụta ...
Data data Order nọmba nwere-060 nhazi ahaziri Ee Nkeji edemede nọmba MWA-nwere-060 Udi Right angle reducer Gear type Gear reducer ingwụnye ụdị Aka nri youtdị nhazi ricdị Tricyclic Gear ekweghị ekwe Hardened ezé elu Ngwa Ngwa Mbelata Brand MWA Mdị MWA-nwere-060 ọsọ ọsọ ọsọ 3000 （rpm） Njirimara 1. Ejikọtara igwe eji arụ ọrụ na oghere ntinye wee kpọchie ya site na mwekota mwekota 2. A na-etinye ogwe ntinye na efere gia; gia efere na jikọọ na outp ...
MWA Right Geleheads Nwere-090
Onye na-ebu Servo Conveyor - HEGY-67